Imbali yeJet Engine - Ngubani owasungula iJet Engine?
Nangona ukuveliswa kwe-injini ye-jet kunokulandelwa emuva kwi-eolipile eyenziwe malunga ne-150 BC, uDkt. Hans von Ohain noSir Frank Whittle bobabini baqatshelwa njengabaqambi be-jet injini njengoko siyazi namhlanje, nangona ngamnye wayesebenza ngokuhlukileyo kwaye akazazi nto ngomnye umsebenzi.
Ukuqhuma kweJet kunokuchazwa nje ngokuba kukho naluphi na uhambo oluhamba phambili lubangelwa ukukhishwa kwangasemva kwe-jet ephezulu yegesi okanye i-liquid.
Kwimeko yokuhamba ngeenjini kunye neenjini, ukuqhuma kwe-jet kuya kuthetha ukuba umatshini ngokwawo uphaswa yi-fuel fuel.
I-Von Ohain ithathwa njengomyili we- injini yokuqala ye-turbojet injini , ngelixa u-Whittle wayengowokuqala ukubhalisa i-patent ye-injini ye-turbojet ngo-1930. Nangona u-von Ohain wanikezelwa ilungelo lobunikazi benjini yakhe ye-turbojet ngowe-1936, kwakuyijethi kaVohain owokuqala ukuba aphephe ngo-1939. Ijethi ka-Whittle yashiya okokuqala ngo-1941.
Nangona kunjalo, kukho intuthuko eninzi kwi-jet propulsion ukususela kumaxesha amandulo, ngoko u-von Ohain kunye no-Whittle bangaba ooyihlo beenjini ze-jet zanamhlanje, abaninzi "ootata" bafika phambi kwabo, bavula indlela yeenjini zejethi esizibona ngaphaya namhlanje.
Iingcamango ze-Jet Early Propulsion Concepts
I-eolipile ye-150 BC yenziwe njengesiqhelo kwaye ayisetyenziselwa nayiphi na injongo. Enyanisweni, bekungeze kube yilapho kuveliswa i-rocket ye-rocket kwi-13th century ngabaculi baseTshayina ukuba ukusetyenziswa kokusetyenziswa kwe-jet ukuqaliswa kuqala.
Ngomnyaka we-1633, i-Ottoman Lagari Hasan Çelebi isebenzisa i-rocket e-shaped-shaped by jet propulsion ukuze iqhube phezulu emoyeni kunye neqoqo lamaphiko ukuze liqhube ngokuphumelelayo. Ngenxa yalo mzamo, wavuzwa ngesimo e-Ottoman Army. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba izitye zingasebenzi ngokukhawuleza kwizithuthi eziqhelekileyo, ukusetyenziswa kwe-jet propulsion kwakubaluleke kakhulu.
Phakathi kwe-1600 kunye neMfazwe Yehlabathi II, ezininzi izazinzulu zenza iinjongo ze-hybridi zonyusa i-aircrafts, kodwa akukho namnye kubo owayesondele kwiziphumo ezizayo zikaSir Frank Whittle noDkt Hans von Ohain. Kunoko, abaninzi basebenzisa enye ifomu yeenjini ze-piston-kubandakanywa neenjini eziphephe zomoya kunye neenjini ezijikelezayo kunye ne-rotary and static-njenge-source power for aircrafts.
I-Turbojet Concept yaseSir Frank Whittle
USir Frank Whittle wayengumqhubi weenqwelo zeeNgesi kunye nomqhubi ojoyine iRoyal Air Force njengomfundi kwaye emva koko waba ngumqhubi wokuvavanya ngo-1931. Le ndoda encinane yayineminyaka engama-22 nje kuphela xa wayecinga ngokuqala ukusebenzisa injini yerinjini yokuqhuba inqwelo. Nangona edlalwa ngokuba nguyise wezixhobo zokuqhubela ijeti zanamhlanje, u-Whittle uzame ukungaphumeleli ukufumana inkxaso esemthethweni yokufunda kunye nophuhliso lweengcamango zakhe kwaye kufuneka aqhube uphando lwakhe ngokwakhe. Ufumene i-patent yakhe yokuqala kwi-turbojet propulsion ngoJanuwari 1930.
Ngenkxaso yezemali, u-Whittle waqala ukwakha ngo-1935 yenjini yakhe yokuqala, eyayine-centrifugal compressor eneqanaba elilodwa elidibeneyo kunye ne-turbine enye. Le nto yayifanele ukuba yinto yokuhlolwa kwebhubhoratri kodwa ihlolwe ngokuphumelelayo ngo-Ephreli 1937, xa ibonisa ukuba inokwenziwa komxholo we- turbojet .
I-Whittle yayidibaniswe neFirm Power Jets Ltd., eyayifumana inkontileka ye-injini ye-Whittle eyaziwayo njenge-W1 ngoJulayi 7, 1939, enqwenela ukulawula inqwelo encinane yokuhlola. NgoFebruwari 1940, i-Gloster Aircraft Inkampani yanyulwa ukuphuhlisa uPhayona, inqwelo-moya eyenziwa yi-W1 injini; Uhambo lokuqala lwe-Pioneer lwenzeka ngoMeyi 15, 1941.
Injini yanamhlanje ye-turbojet esetyenziswa namhlanje kwiindiza ezininzi zaseBrithani naseMerika zisekelwe kwinqanaba elenziwe ngu-Whittle.
Ingqungquthela kaDkt Hans von Ohain eqhubekayo yokuThuthukiswa koMbane
UHan von Ohain wayengumyili weenqwelo zomoya waseJamani owafumana udokotela wakhe kwi-physics kwiYunivesithi yaseGöttingen eJamani waza waba ngumncedisi omncinane kuHugo Von Pohl, umlawuli we-Physical Institute eyunivesithi. Ngethuba apho, umakhi weenqwelo-moya zaseJamani u-Ernst Heinkel wabuza eyunivesithi ukuba ancedwe kwizinto ezintsha zokupakisha kweenqwelo zeenqwelo zomoya, kunye nePohl yaphakanyiswa ngu-Ohain.
Ngelo xesha, u-von Ohain wayephanda uhlobo olutsha lweenjini zeenqwelo-moya ezingazange zifune i-propeller. Uneminyaka engama-22 nje kuphela xa eqala ukuba nombono we-injini yokuqhuma injini ngo-1933, u-von Ohain onelungelo lobunjineli loyilo lwe-jet e-1934 efana neyoyi-Sir Whittle kodwa eyahlukileyo kumalungiselelo angaphakathi.
UVon Ohain wajoyina u-Ernst Heinkel ngo-1936 waza waqhubeka nokuphuhliswa kweengcamango zakhe zokuqhubela i-jet. Uphumelele ngephenye yeenjini zakhe ngoSeptemba 1937, kwaye i-aircraft encinci yenzelwe kwaye yakhiwe ngu-Ernst Heinkel ukuba isebenze njenge-testbed yoluhlobo olutsha lwe-propulsion system eyaziwa ngokuba yiHeinkel He178, eyayihamba okokuqala ngqa Agasti 27, 1939.
I-Von Ohain yavelisa i-injini ye-jet eyayiziphucula i-jet eyaziwa ngokuba yi-S.8A, eyaqala ukuhamba ngo-Aprili 2, 1941.
Ikhadi leTarot leThathu